ရိုပန်းခြံဖိုင်း - မြို့ပြခငြ့်အရေးလှုပ်ရှားသူများနှင့်အိုင်ကွန်
ရိုပန်းခြံတစ်ဦးအဖြစ်လူသိများသည် လူထုအခြေပြုလူ့အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူ, လူမှုရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးသမားနှင့်လူမျိုးရေးတရားမျှတမှုထောက်ခံသူ။ တစ်မြို့ဘတ်စ်ကားပေါ်မှာထိုင်ခုံအရှုံးမပေးဖို့ငြင်းဆန်များအတွက်သူမ၏ဖမ်းဆီးသည့် 1965-1966 Montgomery ဘတ်စ်ကားသပိတ်မှောက်မှုကိုခံလိုက်ရတယ်။
ပန်းခြံများအောက်တိုဘာလ 24, 2005 ဖေဖော်ဝါရီလ 4, 1913 ကနေအသက်ရှင်။ ,
ရိုပန်းခြံ Tuskegee, Alabama တှငျရို McCauley မွေးဖွားခဲ့သည်။ သူမ၏ဖခင်တစ်ဦးလက်သမား, ယာကုပ် McCauley ဖြစ်ခဲ့သည်။ သူမ၏မိခင်, Leona အက်ဒွပ် McCauley တစ်ကျောင်းဆရာဖြစ်ခဲ့သည်။
ရိုနှစ်ခုသာနှစ်အရွယ်မှာသူမ၏မိဘများနှင့်ကွဲကွာ, သူထင်းရူးအဆင့်, Alabama အဘိဓါန်မှသူမ၏မိခင်နှင့်အတူပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ သူမသည်အစောပိုင်းကလေးဘဝထဲကနေအာဖရိကမက်သဒစ် Episcopal အသင်းတော်၌ပါဝင်ပတ်သက်ဖြစ်လာခဲ့သည်။
လယ်လက်အဖြစ်အလုပ်လုပ်ခဲ့သူကိုရိုပန်းခြံ, သူမ၏ညီဖြစ်သူ၏စောင့်ရှောက်မှုကို ယူ. , သူမ၏ငယ်စဉ်ကလေးဘဝအတွက်ကျူရှင်အဘို့အစာသင်ခန်းသန့်ရှင်း။ သူမသည်မိန်းကလေးများများအတွက် Montgomery စက်မှု School မှာလေ့လာခဲ့ပြီးတော့ Negroes များအတွက်ဘားမားပြည်နယ်ဆရာများ '' ကောလိပ်မှာရှိဒသမတန်းပြီးသွား။
သူမသည်ရေမွန်ပန်းခြံတစ် Self-ပညာတတ်လူကို 1932 ခုနှစ်တွင်လက်ထပ်, သူ၏တိုကျတှနျးမှာသူမကအထက်တန်းကျောင်းပြီးစီးခဲ့သည်။ ရေမွန်ပန်းခြံဟာ Scottsboro ယောက်ျားလေးများရဲ့ဥပဒေရေးရာကာကွယ်ရေးအတွက်ပိုက်ဆံပြုစုပျိုးထောင်, အရပ်ဘက်အခွင့်အရေးများအလုပ်အတွက်တက်ကြွစွာဖြစ်ခဲ့သည်။ ထိုကိစ္စတွင်ကိုးအာဖရိကန်အမေရိကန်ယောက်ျားလေးများနှစ်ခုအဖြူအမျိုးသမီးတွေမုဒိမ်းကျင့်စွပ်စွဲခဲ့ကြသည်။ ရိုပန်းခြံသူမ၏ခင်ပွန်းနှင့်အတူအကြောင်းမရှိအကြောင်းကိုအစည်းအဝေးတွေစတင်ခဲ့သည်။
ရိုပန်းခြံတစ်ဦးကအထည်ချုပ်အလုပ်သမတွေတော့, ရုံးစာရေး, ပြည်တွင်းနှင့်သူနာပြုရဲ့လက်ထောက်အဖြစ်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။
သူမသည်ချက်ချင်းအတွင်းရေးမှူးဖြစ်လာ, ဒီဇင်ဘာလ, 1943 ခုနှစ် NAACP မျြးအခနျးကွီး Alabama အဘိဓါန်အဆိုပါ Montgomery အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်လာခဲ့သည်။ သူမသည်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုဟာသူတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံအပေါ် Alabama အဘိဓါန်န်းကျင်ကလူအင်တာဗျူးနှင့်မဲဆန္ဒရှင်မှတ်ပုံတင်နှင့် desegregating သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအပေါ် NAACP အတူအလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
သူမသည်ခြောက်လအဖြူယောက်ျားကမုဒိန်းကျင့်ခဲ့ဖူးသောလူငယ်တစ်ဦးအာဖရိကန်အမေရိကန်အမျိုးသမီးတစ်ဦး၏ထောက်ခံမှုအတွက်မစ္စစ် Recy တေလာများအတွက်တူညီသောအခွင့်အရေး Equal တရားမျှတမှုများအတွက်ကော်မတီစည်းရုံးရေးအတွက်သော့ချက်ဖြစ်ခဲ့သည်။
နှောင်းပိုင်း 1940 ခုနှစ်, Rosa ပန်းခြံသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး desegregate ဖို့ဘယ်လို ပတ်သက်. အရပ်ဖက်လူ့အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူစက်ဝိုင်းအတွင်းဆွေးနွေးမှုများ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။ 1953 ခုနှစ်ရုဂျြအတွက်သပိတ်မှောက်ကြောင်းအကြောင်းမရှိအတွက်အောင်မြင်ခဲ့နှင့်ဘရောင်း v အတွက်တရားရုံးချုပ်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကို။ ပညာရေးဘုတ်အဖွဲ့အပြောင်းအလဲအတွက်မျှော်လင့်ခဲ့သည်။
ရိုပန်းခြံသူမ၏အလုပ်ကနေဘတ်စ်ကားနေအိမ်စီးနင်းအခါဒီဇင်ဘာလ 1, 1955, တွင်, သူမရှေ့မှာအဖြူခရီးသည်များအတွက် reserved အတွက်တန်းစီများနှင့်နောက်ကျောမှာ "ရောင်စုံ" ခရီးသည် "အဘို့သိုထားသည့်တန်းများအကြားတစ်ဦးအချည်းနှီးသောအပိုင်း၌ထိုင်တော်မူ၏။ အဆိုပါဘတ်စ်ကား တက်ဖြည့်, သူသုံးယောက်ကတခြားလူမည်းခရီးသည်တစ်ဦးလူဖြူရပ်တည်မှုကျန်ရစ်ခဲ့လို့သူတို့ရဲ့ထိုင်ခုံလက်လွှတ်ရန်မျှော်လင့်ခဲ့ကြသည်။ ဘတ်စ်ကားမောင်းသူကသူတို့ကိုချဉ်းကပ်လာသောအခါသူမသည်ရွှေ့ဖို့ငြင်းဆန်ခဲ့သည်, သူသည်ရဲကိုခေါ်။ ရိုပန်းခြံ Alabama အဘိဓါန်ရဲ့အအသားအရောင်ခွဲခြားဥပဒေများကိုချိုးဖောက်ဘို့ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသည် ။ အဆိုပါအနက်ရောင်အသိုင်းအဝိုင်း 381 ရက်ကြာကြာမြင့်နဲ့ Montgomery ရဲ့ဘတ်စ်ကားပေါ်အသားအရောင်ခွဲခြား၏ဇာတ်သိမ်းအတွက်ရလဒ်သောဘတ်စ်ကားစနစ်၏တစ်သပိတ်မှောက်အသုံးချ။
မာတင်လူသာကင်း Jr ။
ဇွန်လ, 1956 ခုနှစ်, တရားသူကြီးတစ်ဦးတစ်ပြည်နယ်အတွင်းဘတ်စ်ကားသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကွဲကွာမရနိုငျသောအုပ်ချုပ်, နှင့်အမေရိကန်တရားရုံးချုပ်နောက်ပိုင်းမှာအဲဒီနှစ်အာဏာရအတည်ပြု။
ရိုပန်းခြံနှင့်သူမ၏ခင်ပွန်းနှစ်ဦးစလုံးသပိတ်မှောက်အတွက်ပါဝင်ပတ်သက်ဖြစ်ခြင်းဘို့မိမိတို့အလုပ်အကိုင်များဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ ထိုစုံတွဲကသူတို့ရဲ့နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးလှုပ်ရှားမှုဆက်လက်ဘယ်မှာသူတို့က 1957 သြဂုတ်လထဲမှာဒက်ထရွိုက်သို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ ရိုပန်းခြံဝါရှင်တန်, နာမည်ကြီးမာတင်လူသာကင်း Jr ကမိန့်ခွန်း "ကျွန်မနေတဲ့အိပ်မက်ဖူး" ၏ site ပေါ်တွင် 1963 ခုနှစ်မတ်လထံသို့သွားလေ၏။ 1964 ခုနှစ်တွင်သူမကွန်ဂရက်မှဆရာယောဟနျ Conyers ရွေးကောက်တင်မြှောက်ကူညီပေးခဲ့သည်။ သူမလည်း 1965 ခုနှစ်တွင် Selma ထံမှ Montgomery မှချီတက်။
1988 Raymond ပန်းခြံ 1977 ခုနှစ်မှာကွယ်လွန်သွားချိန်အထိ Conyers ၏ရွေးကောက်ပွဲပြီးနောက်, Rosa ပန်းခြံကသူ၏န်ထမ်းများအပေါ်အလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
1987 ခုနှစ်တွင်ရိုပန်းခြံလူမှုရေးတာဝန်ယူမှုအတွက်လူငယ်လာအောင်နှိုးဆွခြင်းနှင့်လမ်းပြအုပ်စုတစုကိုတည်ထောင်ခဲ့သည်။ သူမသည်ခရီးထွက်ခြင်းနှင့်နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးလှုပ်ရှားမှု၏သမိုင်းလူတွေကိုသတိပေး, 1990 ခုနှစ်မကြာခဏသင်ကြားပေးခဲ့သည်။
သူမသည်ဟုခေါ်ဝေါ်ခြင်းကိုခံရဆီသို့ရောက် လာ. , "ဟုအဆိုပါနိုင်ငံသားအခွင့်အရေးလှုပ်ရှားမှု၏မယ်တော်။ "
သူမသည် 1999 ခုနှစ်က 1996 ခုနှစ်တွင်လွတ်လပ်ခွင့်၏နိုင်ငံတော်သမ္မတအိမ်တော်တံဆိပ်နှင့် Congressional Gold Medal လက်ခံရရှိခဲ့သည်။
ရိုပန်းခြံလိုလိုလားလားအရပ်ဘက်အခွင့်အရေးများရုန်းကန်နေတဲ့သင်္ကေတများအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်သူမသေဆုံးခင်အထိအရပ်ဘက်အခွင့်အရေးများမှသူမ၏ကတိကဝတ်ဆက်ပြောသည်။ ရိုပန်းခြံသူမ၏ဒက်ထရွိုက်အိမ်မှာ, အောက်တိုဘာလ 24, 2005 ရက်တွင်ကသဘာဝအကြောင်းတရားများ၏အနိစ္စရောက်လေ၏။ သူမသည် 92 ခဲ့သည်။
သူမသေဆုံးပြီးနောက်သူမဝါရှင်တန်ဒီစီမှာရှိတဲ့ကက်ပီတောလ် Rotunda မှာဂုဏ်အသရေအတွက်အိပျခဲ့သူပထမဦးဆုံးအမျိုးသမီးတစ်ဦးနှင့်ဒုတိယအာဖရိကန်အမေရိကန်ဖြစ်ခြင်းအပါအဝင်ခှနီးပါးအပြည့်အဝရက်သတ္တပတ်၏ဘာသာရပ်ခဲ့သည်
ငါသည်ခပ်သိမ်းသောလူတို့အဘို့လွတ်လပ်မှုနှင့်တန်းတူညီမျှမှုနှင့်တရားမျှတမှုနှင့်စည်းစိမ်ချမ်းသာနှင့် ပတ်သက်. သက်ဆိုင်ရာသူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအဖြစ်လူသိများခံရဖို့လိုပါတယ်။
ပြည်သူ့အစဉ်အမြဲငါငြီးငွေ့ကြောင့်ငါသည်ငါ့ထိုင်ခုံအရှုံးမပေးဘူးလို့ပြောပေမယ့်စစ်မှန်တဲ့မဟုတ်ပါဘူး။ ငါရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပင်ပန်းမဟုတ်ခဲ့, ဒါမှမဟုတ်မပိုပင်ပန်းငါများသောအားဖြင့်တစ်ဦးအလုပ်လုပ်တစ်နေ့တာရဲ့အဆုံးမှာကြီးထက် သာ. ကောင်း၏။ တချို့လူတွေကပြီးတော့အဟောင်းကိုဖြစ်ခြင်းသကဲ့သို့ငါ့ကို၏ပုံရိပ်တစ်ခုရှိပေမယ့်ငါအဟောင်းမဟုတ်ခဲ့ပေ။ ငါလေးဆယ်နှစ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါမကြီးကသာပင်ပန်းအတွက်ပေးကမ်း၏ပင်ပန်းခဲ့ပါတယ်။
အကြိမ်ပေါင်းများစွာဘာလို့လဲဆိုတော့ငါသင်မှာအားလုံးဘတ်စ်ကားပေါ်မရစေခြင်းငှါ, သောအမှုကိုပြုလျှင်ပင်, ငါ့ခပေးဆောင်ပြီးတော့နောက်ကျောတံခါးကိုတဝိုက်သွားချင်ကြဘူး။ သူတို့ဟာဖြစ်ကောင်း, တံခါးကိုပိတျချွတ်မောင်း, ထိုအရပ်၌ရပ်နေသောသင်တို့ကိုစွန့်ခွာချင်ပါတယ်။
ငါအဖမ်းခံခဲ့ရသည်ထိုအချိန်ကကျွန်မဒီသို့လှည့်မယ်လို့မျှစိတ်ကူးရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာမဆိုအခြားတစ်ရက်နဲ့တူရုံတစ်နေ့ဖြစ်ခဲ့သည်။ ကသိသိသာသာကိုဖန်ဆင်းသောတစ်ခုတည်းသောအရာလူအများ၏ထုအတွက်ပူးပေါင်းကြောင်းဖြစ်ခဲ့သည်။
ငါတစျဦးရဲ့စိတ်ကိုဖွင့်ကိုဖန်ဆင်းသောအခါ, ဒီကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်မှေးမှိန်သောနှစ်အတွင်းလေ့လာသင်ယူကြပြီ ပြုမိရမည်ဖြစ်သည်မှုအရာကိုမသိဘဲကြောက်ရွံ့ခြင်းနှင့်ကွာပါဘူး။
[F ကို] ငါကလေးတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သည်အချိန်ကို ROM, ငါမလေးစားကုသမှုဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။
လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်သူတို့ကဖြည့်ဆည်းရန်ရှိသည်အရာကိုငါတို့သားသမီးကြိုတင်ပြင်ဆင်ရန်နှင့်, မျှော်လင့်ကျနော်တို့ကျော်လွှားရကြလိမ့်မည်ကျွန်တော်တို့ကိုမှတက်သည်။
ငါအကောင်းမြင်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ချက်နှင့်ပိုကောင်းတဲ့နေ့ကမျှော်လင့်အတူဘဝကိုကြည့်ရှုဖို့ငါလုပ်နိုင်အလွန်အကောင်းဆုံးလုပ်ပေးပေမယ့်ဒီလိုပြည့်စုံပျော်ရွှင်မှုကိုအဖြစ်ဘာမှရှိမထင်ကြဘူး။ ဒါဟာ Klan လှုပ်ရှားမှုနဲ့လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုတွေအများကြီးရှိသေးကြောင်းငါ့ကိုနာကျင်။ ငါသင်ပျော်ရွှင်နေဟုပြောသည့်အခါ, သင်လိုအပ်သမျှနှင့်သင်ချင်သောအရာအားလုံးနှင့်အဘို့ဆန္ဒရှိဖို့ပိုအဘယ်အရာမျှရှိထင်ပါတယ်။ ငါသေးကြောင်းဇာတ်စင်ရောက်ရှိကြပြီမဟုတ်။ (အရင်းအမြစ်)
လှတျမွောကျ Dane ၏အတ္ထုပ္ပတ္တိ
မင်းသမီး Emma Goldman Quotes
Lesbos ၏ Sappho
မီးခိုးရောင်ရဲ့ခန္ဓာဗေဒရာသီ3အပိုင်းလမ်းညွှန်
Eteocles နှင့် Polynices: မင်္ဂလာရှိညီအစ်ကိုများနှင့် Oedipus သား
Juniata ကောလိပ် GPA, SAT နှင့် ACT ဒေတာများ
တိရိစ္ဆာန် Holes နှင့်ဂေါက်ကွင်း၏စည်းကမ်းများ Burrowing: အဘယ်အရာကိုအရည်အချင်းပြည့် & ကယ်ဆယ်ရေး
Ali - သက္ကရာဇ်အဓိပ္ပာယ်နှင့်မိသားစုသမိုင်း
သင်ကတပတ်ရစ် ATV သည်ကိုကြည့်ပါအဘယျသို့အထဲက Find ကိုဝယ်ခင်မှာ
မေးလ် Delivery USPS ဝန်ခံသည်သန်းတောင်မှပိုနှေးတယ်ဖြစ်နိုင်
ကောလိပ်ပြီးစီးကလေးများ5ဂရိတ်စာအုပ်များ
အဘယ်ကြောင့်နာနတ်သီးပျက်စီးခြင်း Jell အိုပါသလား
Karma ဆွစ်ဖ်နှင့် Hilary နှစ်ဦးစလုံးခဲ့သည့်အခါ 20 Times သတင်းစာ
ပြင်သစ်တွင် "Reconnaître" (အသိအမှတ်ပြု) ကို Conjugate လုပ်နည်း